Indlela swaddle izinsana?
Noma yimuphi umama esizayo lonke isikhathi sokukhulelwa is bahlushwe umbuzo owodwa: "Ngazi kanjani ukuthi kudingeka sibe ingane yami?" Ingabe omama ogogo kule impendulo eyodwa: inhliziyo kamama ekutshela. Inhliziyo, yebo, inhliziyo, kodwa zikhona ezinye imininingwane luyingxenye lobuchwepheshe, okuyinto ezinjani ukuze ufunde esesesiswini.
Ngokwesibonelo, indlela ukuze swaddle izinsana? Ingane swaddle wabantwana ngisho egumbini ukulethwa. Kodwa ngemva kwesikhathi esithile uyeke ingane, futhi uzokwenza konke ngokwakho - ukondla futhi kokuqeda swaddling. Yiqiniso, ezithela phezu kwalowaya mhlengikazi liyadingeka lingene endlini bese utshela ngokuningiliziwe futhi ubonise kanjani swaddle izinsana kahle. Ungakwazi ezinqumela abaqhuba ku onodoli, kodwa okokuqala umntwana swaddle ukuphila kuphela amayunithi ehluleka.
Su swaddling ngamunye ekhetha. Ngaphambili, kwakukhona indlela eyodwa kuphela - Friend swaddling. Ingane zihambisana kangangokuthi kwakusengathi Ngokuvamile kunzima kakhulu ukuba naye ukuphefumula. Incazelo iwukuthi nje ihlaya - izinyane akesabi nemilenze yakhe siqu (yena namanje senhliziyo kunezinxushunxushu) futhi kuyoba imilenze ngokuphelele bushelelezi. Ngenhlanhla, paediatricians ehola bakwazi rebut lesi sitatimende kokudumazeka futhi, ngaphezu kwalokho, wafakazela ukuthi kuyingozi kakhulu ingane. Ingane iphule izinqubo zokuphefumula, thiya kwegazi, okuholela okusithiyayo yentuthuko.
Ngemva kwalokho, kwaphakama umbuzo futhi: "Ngakho-ke indlela swaddle izinsana?" Ochwepheshe engimamukele indlela entsha - swaddling khulula. Inabukeni ingane ngobumnene umboza umzimba, it is ngokuphelele hhayi constraining ukunyakaza. Ngale ndlela umntwana umuzwa ukuthi wayengumuntu esibelethweni, futhi elele eziningi ezikhathini ezinzima. Kodwa kwabe sekufika u omunye umbuzo: "? Pho swaddle, uma ungakwazi abeke ingane ngezilayidi kanye undershirt womntwana" Ngemva kwalokho, bonke ochwepheshe zezingane emhlabeni ukugxila kwelinye: umama Kufanele ukhethe uqobo.
Ngempela, indlela swaddle izinsana ukuthi kuwufanele ukwenza nhlobo, kukuwe umama. Cabangela kudingeka lezi zinto ezilandelayo kuphela:
- emavikini ekucala ezimbili umntwana angakwazi ngempela isizathu sokwethuka yezandla zabo nezinyawo;
- zonke odezhka umntwana kufanele kube kuphela ngezinto imvelo, akufanele uneminye bensimbi kanye nezinye iziqobosho anolaka, ezivuzayo kufanele kube ngaphandle;
- ukugeza namanabukeni noma izingubo kungcono kakhulu ngensipho zezingane, kahle ukususa zonke bese bushelelezi ephelele. Kahle kahle, kwazo zonke izinto zezingane kumele kubiliswe, kungakhathaliseki, kungcono namanabukeni, amathoyizi noma izinto (kuhlanganise izitsha zesiliva);
- ku ikhabethe ingane yakho kumele ibe undershirts nge imikhono ithungwe noma amagilavu ekhethekile;
- kusukela ngesonto lesithathu ukuphila sokubelethwa komntwana isidingo bokuphila ukudonsa izandla zakho emlonyeni wakho, futhi uma ungakwazi ukwenza lokhu kuzoba ezingezwakali kakhulu;
- uma namanje esongwe, noma kunjalo, ungafaki ku oilcloth inabukeni - ukuqubuka umntwana inabukeni zingavela;
- uma izinga lokushisa egumbini kwenza kube nokwenzeka - shiya ingane yakho ze eside ngangokunokwenzeka. Air zokugeza uvumele izikhumba wokuphefumula, futhi senzakalo ithuba nale mkhuba ezingemnandi njengoba ukushisa prickly (noma ukushisa ezimise okwama-tile), kwehle kakhulu.
Omama abaningi abakhetha diapering, ucabangela ukuthi inabukeni Friend ngokuphephile uvala chain nge esiphambanweni. Lena edukisayo. Uma ingane yakho kahle, uyokwenza bend ukuze namanje khulula kusuka zonke namanabukeni. Ngakho uma christened usana lwakhe obelusanda kuzalwa, hang esiphambanweni ezintanjeni iDemo. Abanye, ngomzamo ukukhombisa nengcebo yabo eningi, elenga entanyeni umntwana wonke umgexo ngesiliva noma ngegolide, engaboni ukuthi esimweni engcono, ingabangela isikhumba ukucasuka.
Indlela umoya izinwele ngefaskamu ezintofontofo?
Bone china. Ake jwayelana
Moonshine amabili umusi sigubhu - iziphi izinzuzo zayo?
Isethi Fondue: okumnandi futhi kulula!
Kanjani ukuba abhodloze izicathulo ezintsha: amathiphu namasu
Ama-roller nhlabathi compaction: ukubukwa kanye nokubuyekeza
Izinhlobonhlobo Ezidume kakhulu, Inani lamaKhwamesi wekhofi, Ikhofi Ezinhlamvu
Kuyini umhlonyane? Umhlonyane - isithombe. Lesitshalo umhlonyane: incazelo, igama
Indaba emfushane kanye abadlali. "Umgexo ngoba indoda yeqhwa" - Christmas melodrama yomqondisi Ukrainian Alexander Darugi
ULevin Kurt: biography, isithombe, impumelelo, ukuhlolwa. Inkolelo ka-Kurt Lewin yasensimini imfushane
Ukuvuvukala izinsini? Ukwelashwa nje kudingeka
I-Pepper "isipho se-Moldova": izibuyekezo nezici
Ukucinga Man Kwamanye Amazwe
Indlela ukususa ngemvume ku-Skype
"Ukukhululwa Kwe-Ultra": imiyalelo yokusetshenziswa nokubuyekezwa kwesidakamizwa
Yini eholela umuntu self-ukubhujiswa: yisayensi